ဒီ (၁၆)ချက် ကို အလွတ် မှတ်နိုင် ရင် မင်း ဘ၀ ဘယ်တော့မှ ဒုက္ခဆိုတာ မရှိနိုင်တော့ပါ – Na Pann San
Na Pann | February 29, 2020 | Knowledge | No Comments
ဒီ ( ၁ ၆ ) ချက် ကို အလွတ်မှတ်နိုင်ရင် မင်းဘ၀ ဘယ်တော့မှ ဒုက္ခဆိုတာ မရှိနိုင်တော့ပါဘူးနော် … ။ လေ့လာပြီး မှတ်သားထားသင့်သော စကားလုံးများ ….
၁။ ကိုယ့်မျက်စိနဲ့ သေသေချာချာ မတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုရင် ပါးစပ်နဲ့ အလျင်စလိုသက်သေမပြချင်ပါနဲ့၊ ၂။ ကိုယ်မသိတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကို “ မသိဘူး ” လို့ တိုက်ရိုက်ဖြေဆိုလိုက်တာ အပေါ့ပါးဆုံးပါ။ ၃။ တစ်ယောက်ယောက်က သင့်ကို ကျောက်ခဲနဲ့ ပေါက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်၊ပြန်မပေါက်နဲ့တော့၊ အုပ်မြစ်တည်ဖို့ စုဆောင်းထားလိုက်ပါ။ ၄။ လူဆိုတာ ကျော်ကြားလာရင်တော့ အတင်းများမှာပဲ၊ အဲဒီ အတင်းတွေကိုကြောက်ရင် မကျော်ကြားနဲ့ပေါ့၊ ၅။ သီးခံနိုင်ရင် သီးခံပါ။ သီးမခံနိုင်ရင် ပြောင်းလဲပါ။ ပြောင်းလဲလို့မှ မရရင် ကုသိုလ်အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ပါ။
၆။ ပြသနာကြုံရင်၊ ခဏဆိုင်းထားလိုက်၊ စကားပြောရင် ခဏရပ်ကြည့်လိုက်၊ ကိစ္စတော်တော်များများ ကြည်လင်လာလိမ့်မယ်။ ၇။ မိမိအရောင်တောက်ပပါစေ။ သူများဆီမီးကိုလည်း သွားမငြိမ်းမိပါစေနှင့်၊ ၈။ ကလေကခြေတွေနဲ့ သွားရန်မလုပ်နဲ့၊ သူတို့နဲ့ ထိုက်တဲ့ရန် သူတို့တိုးလိမ့်မယ်။ ၉ ။ မျက်စိမိတ်ပြီး ဂုဏ်မယူပါ။ တမင်တကာလည်း မနှိမ့်ချပါ။ ၁၀။ သူများမသိစေချင်တဲ့ လျို့ ဝှက်ချက်ကို ဘယ်တော့မှ ဖေါ်ထုတ်ရန် မကြိုးစားသင့်ပါ။
၁၁။ အသီးဆိုတာ မဲ့မှ ခူးသင့်သလို ၊ အတွေးခေါ်ဆိုတာလည်း ပြည့်စုံမှ ဖေါ်ထုတ်သင့်ပါတယ်။ ၁၂။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စများအတွက် ပြသနာ အတက်မခံဘူး၊ ရူပ်ထွေးတဲ့ ကိစ္စများအတွက် စိတ်ညစ်မခံဘူး၊ စိတ်ဆိုးတဲ့အချိန်မှာ စကားမပြောဘူး၊ဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန်မှာ မဆုံးဖြတ်ဘူး။ ၁၃။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မှားပြီလို့ ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်မှန်ကန်စပြုလာပြီ။ ၁၄။ စိတ်ထဲမှာ ရန်လိုနေရင်တော့ တစ်လောကလုံးမှာ ရန်တွေကြီးကြီးပါပဲ။ ၁၅။ သူများကို သွားမလိမ်ပါနဲ့။ ကိုယ်လိမ်လိုက်တဲ့လူအားလုံးဟာ ကိုယ့်ကိုယုံကြည်တဲ့သူများဖြစ်ကြတယ်။
၁၆။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မူရှိတာ အလွန်ကောင်းပါတယ်။ မောက်မာတဲ့အဆင့်ထိတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှိမ့်ချတာလည်း ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ယုံကြည်မူ ထိခိုက်လောက်တဲ့အထိတော့ မဖြစ်သင့်ပါ … ။
ဒီ ( ၁၆) ခကျြ ကို အလှတျမှတျနိုငျရငျ မငျးဘ၀ ဘယျတော့မှ ဒုက်ခဆိုတာ မရှိနိုငျတော့ပါဘူးနျော … ။ လလေ့ာပွီး မှတျသားထားသငျ့သော စကားလုံးမြား ….
၁။ ကိုယျ့မကျြစိနဲ့ သသေခြောခြာ မတှခေဲ့ဘူးဆိုရငျ ပါးစပျနဲ့ အလငျြစလိုသကျသမေပွခငျြပါနဲ့၊ ၂။ ကိုယျမသိတဲ့ ကိစ်စတဈခုကို “ မသိဘူး ” လို့ တိုကျရိုကျဖွဆေိုလိုကျတာ အပေါ့ပါးဆုံးပါ။ ၃။ တဈယောကျယောကျက သငျ့ကို ကြောကျခဲနဲ့ ပေါကျခဲ့မယျဆိုရငျ၊ပွနျမပေါကျနဲ့တော့၊ အုပျမွဈတညျဖို့ စုဆောငျးထားလိုကျပါ။ ၄။ လူဆိုတာ ကြျောကွားလာရငျတော့ အတငျးမြားမှာပဲ၊ အဲဒီ အတငျးတှကေိုကွောကျရငျ မကြျောကွားနဲ့ပေါ့၊ ၅။ သီးခံနိုငျရငျ သီးခံပါ။ သီးမခံနိုငျရငျ ပွောငျးလဲပါ။ ပွောငျးလဲလို့မှ မရရငျ ကုသိုလျအဖွဈ သတျမှတျလိုကျပါ။
၆။ ပွသနာကွုံရငျ၊ ခဏဆိုငျးထားလိုကျ၊ စကားပွောရငျ ခဏရပျကွညျ့လိုကျ၊ ကိစ်စတျောတျောမြားမြား ကွညျလငျလာလိမျ့မယျ။ ၇။ မိမိအရောငျတောကျပပါစေ။ သူမြားဆီမီးကိုလညျး သှားမငွိမျးမိပါစနှေငျ့၊ ၈။ ကလကေခွတှေနေဲ့ သှားရနျမလုပျနဲ့၊ သူတို့နဲ့ ထိုကျတဲ့ရနျ သူတို့တိုးလိမျ့မယျ။ ၉ ။ မကျြစိမိတျပွီး ဂုဏျမယူပါ။ တမငျတကာလညျး မနှိမျ့ခပြါ။ ၁၀။ သူမြားမသိစခေငျြတဲ့ လြို့ ဝှကျခကျြကို ဘယျတော့မှ ဖျေါထုတျရနျ မကွိုးစားသငျ့ပါ။
၁၁။ အသီးဆိုတာ မဲ့မှ ခူးသငျ့သလို ၊ အတှေးချေါဆိုတာလညျး ပွညျ့စုံမှ ဖျေါထုတျသငျ့ပါတယျ။ ၁၂။ ရှငျးရှငျးလငျးလငျးဖွဈတဲ့ကိစ်စမြားအတှကျ ပွသနာ အတကျမခံဘူး၊ ရူပျထှေးတဲ့ ကိစ်စမြားအတှကျ စိတျညဈမခံဘူး၊ စိတျဆိုးတဲ့အခြိနျမှာ စကားမပွောဘူး၊ဒေါသထှကျနတေဲ့အခြိနျမှာ မဆုံးဖွတျဘူး။ ၁၃။ ကိုယျ့ကိုယျကို မှားပွီလို့ ဆငျခွငျလိုကျတဲ့ အခြိနျမှာ ကိုယျမှနျကနျစပွုလာပွီ။ ၁၄။ စိတျထဲမှာ ရနျလိုနရေငျတော့ တဈလောကလုံးမှာ ရနျတှကွေီးကွီးပါပဲ။ ၁၅။ သူမြားကို သှားမလိမျပါနဲ့။ ကိုယျလိမျလိုကျတဲ့လူအားလုံးဟာ ကိုယျ့ကိုယုံကွညျတဲ့သူမြားဖွဈကွတယျ။
၁၆။ ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျမူရှိတာ အလှနျကောငျးပါတယျ။ မောကျမာတဲ့အဆငျ့ထိတော့ မဖွဈသငျ့ဘူး။ကိုယျ့ကိုယျကို နှိမျ့ခတြာလညျး ကောငျးပါတယျ။ဒါပမေဲ့ ယုံကွညျမူ ထိခိုကျလောကျတဲ့အထိတော့ မဖွဈသငျ့ပါ … ။
မိဘမြား သတိထားနိုငျ ဖို့ ပါ ဖုနျးကွညျ့တာ မြားလှနျးလို့ (၄)နှဈအရှယျမှာပဲ မကျြလုံးခှဲစိတျမှုခံယူခဲ့ရတဲ့ ကလေးမလေး
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း (၁၀၀) ကျော် က မြန်မာ လူဦးရေ (၃) သိန်းကျော် ကို သေဆုံးစေခဲ့သော တုပ်ကွေးရောဂါ
ကျီးပေါင်း အတွက် အကောင်းဆုံး မိဿလင်ကြပ်ထုပ် ပြုလုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့်